Taham-pisondrotana, ora amin'ny tranokala sy ny fizahana hetsika | Martech Zone
Taham-pisondrotana, ora amin'ny tranokala sy ny fizahana hetsika
Alarobia, Oktobra 12, 2011 Zoma, Jona 13, 2014 Douglas Karr
Mbola betsaka ny tsy fahazoan-kevitra momba ny famaritana ny tahan'ny fiakarana, ny fiantraikany ratsy eo amin'ny tranokalanao, ary ny fomba ahafahanao miasa manatsara azy. Koa satria ny ankamaroanao dia mampiasa Google Analytics, dia zava-dehibe ny fahatakarana ny fomba itondran'ny Google ny fitomboana.
Voalohany, mety tsy tsapanao izany fa Fotoana antonony eo amin'ny tranokala ho an'ny mpitsidika maty dia mitovy amin'ny aotra foana. Raha atao teny hafa, araka ny hitanao Fotoana antonony eo amin'ny tranokala, mampiseho ny fotoana laninao amin'ny tranokalanao fotsiny izany aza mamely. Toa mampiavaka ahy izany. Tiako ho fantatra hoe mandra-pahoviana ny olona mijanona alohan'ny hitsanganany hahitana raha misarika ny sain'izy ireo farafaharatsiny aho. Mampalahelo fa tsy azo atao izany raha tsy misy hacks sasany. Andramo ny tenanao… ity sary ity dia mampiseho tatitra voasivana ho an'ireo mpitsidika tafintohina fotsiny… vokatr'izany a Fotoana antonony eo amin'ny tranokala amin'ny 0.
Mahaliana tokoa, raha mifanerasera amin'ny pejinao ny mpitsidika anao misy fomba azo zahana (ivelan'ny fialana), tsy sokajiana ho fipoahana izy ireo! Ka… raha manampy ianao fanaraha-maso ny hetsika amin'ny bokotra filalaovana na antso hanao hetsika, ary tsindrio ilay olona… tsy sokajiana ho bouncing izy ireo. Ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra fa ny fipoahana dia izay tonga teny amin'ny tranonkalanao ary avy eo lasa. Tsy… fa olona tonga amin'ny tranokalanao izy ireo, tsy mifanerasera amin'ny fomba hafa, ary avy eo miala.
Raha manara-maso fisehoan-javatra na fijery pejy fanampiny amin'ny pejy iray ianao, dia ara-teknika ilay olona tsy nibolisatra. Ka raha mpitantana varotra ianao izay sahirana amin'ny taha ambony, tokony hojerenao farafaharatsiny mba hifaneraseran'ny mpitsidika amin'ny tranokalanao amin'ny fomba rehetra alohan'ny hiaingany. Izany dia azo tanterahina amin'ny fampidirana ny fanarahan-dia hetsika amin'ny toerana rehetra azo atao.
Mieritrereta momba ireo singa ao amin'ny pejy azonao atao apetraho ny fanaraha-maso hetsika:
Raha manana rohy amin'ny pejinao ianao mitondra fiara any ivelan'ny fifamoivoizana fanahy iniana, mety te hanaraka an'io hetsika io ianao. Mila kaody kely anefa, hahazoana antoka fa azo ny hetsika alohan'ny handaozanao ny pejy.
Raha manana ianao tranokala afaka mandeha amin'ny jQuery miaraka amin'ny fanaraha-maso ho an'ny mpitsidika mba hifaneraserana amin'ireo mpikorisa na singa hafa, azonao atao ny manampy a jQuery Google Analytics plugin izay manamora ny fanarahana hetsika amin'ny hetsika.
Safidy mandroso hafa dia ny manampy a faharoa Kaonty Google Analytics amin'ny pejinao ary manaraha fizaha pejy faharoa eo noho eo rehefa mavesatra ilay pejy. Izany dia hampihena ny tahan'ny fientanentanana ho 0 ao amin'io kaonty io fa hanome anao fotoana eo ho eo amin'ny antontan'isa isaky ny mpitsidika. Avy eo ianao dia afaka mampiditra fizarana miaraka amin'ny sivana tsy dia misy fijerena pejy 3. Izany dia hanala ireo izay tsy nipoitra tamin'ny lafiny teknika ary hanome anao fotoana amin'ny angona momba ny tranokala.
Ary aza adino ny manara-maso ny tahan'ny fiakaran'ny indostria hahitanao ny mampitaha ny tranokalanao. Fanamarihana iray - mazàna isika mahita tranonkala manana fiakarana avo lenta amin'ny taha ambony kokoa. Ny fitondran-tenan'ny mpitsidika ho an'ireo izay tonga avy amin'ny fikarohana dia mampiseho taratra ny hetsika fitetezam-paritany bebe kokoa izay hijeren'izy ireo valim-pikarohana marobe ary hiala rehefa avy naka sary fohy an'ilay pejy. Aza gaga amin'izay raha misambotra fifamoivoizana misimisy kokoa ianao ary miakatra ny tahan'ny fiakarana!
Tags: bounce ratefanaraha-maso ny hetsikaGoogle Analyticsfotoana eo amin'ny toerana
Aza manadino PR nentim-paharazana
Horonan-tsary: ​​SmallBox Web Design & Marketing